Ọdachi maka ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Israel na mmachibido njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Ọdachi maka ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Israel na mmachibido njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mịnịsta njem nke njem Orit Farkash-Hacohen
Ndị otu ọdịbendị sitere na United States edebanyelarị ga -enwe ike ịga Israel, mana onweghị onye ma ihe ga -esote ahịa ndị njem na -abata n'Izrel mgbe nke a gasịrị.
Site na Aron Rosenthal / The Media Line
Ndị ọbịa si US, France, Germany, Italy na Greece so na ndị ga-anọrọ onwe ha mgbe ha bịarutere
Israel na-achọ ịkele COVID-19 nke ọma ma nwee mmasị maka njem, mgbe COVID-19 lọghachiri.
Israel machibidoro ndị mmadụ ọgwụ mgbochi ọrịa site n'ọtụtụ ebe, gụnyere ụlọ nzukọ.
Echiche ọ bụla nke ndị njem nleta na ndị nwere azụmaahịa ka na -eme njem na Israel ga -alaghachi na nkịtị oge ọ bụla ọkwa mgbasa ozi nke Health wepụrụ n'izu a na ruo Ọgọst 11, a ga -achọ ka onye ọ bụla si mba 18 ọzọ banye iche iche. agbanyeghị afọ ole ha nwere ma agbatịla ha ọgwụ mgbochi ma ọ bụ gbakee na coronavirus ọhụrụ.
Mba a ga -etinye na ndepụta "Ịdọ aka na ntị njem siri ike" bụ Botswana, Bulgaria, Cuba, Czech Republic, Egypt, Eswatini (nke a na -akpọbu Swaziland), France, Germany, Greece, Iceland, Italy, Malawi, Netherlands, Tanzania , Rwanda, Tunisia, Ukraine, na United States.
Ihe ikpeazụ dị na ndepụta a bụ nke kacha emetụta ndị ọchụnta ego na mpaghara njem na ile ọbịa. Nke a bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị otu na -abata na mba ahụ dị ka akụkụ nke mmemme ịnya ụgbọ elu, ma ọ bụ site na mmemme ọmụmụ, sitere na US.
Ugbua na ndepụta “ịdọ aka na ntị siri ike” bụ Cambodia, Colombia, Fiji, Guatemala, Honduras, Mongolia, Myanmar, Namibia, United Arab Emirates, na Zimbabwe.
Na Israel amachibidola ụmụ amaala ya ime njem na mba 14 - Argentina, Belarus, Brazil, Cyprus, Georgia, India, Kyrgyzstan, Mexico, Turkey, Russia, South Africa, Spain, United Kingdom, na Uzbekistan - belụsọ na ha nwetara ikike site na kọmitii iche.
Onye na -ekwuchitere onye na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Rent, gwara The Media Line, “Ugbu a, United States bụ otu n'ime mba ndị [zigara ndị mmadụ] Israel dị ka ndị njem, [ugbu a] etinyela ya n'okpuru 'oroma. 'label, nke pụtara na ọ ga-adị mkpa ka ha kewapụ onwe ha ma ọ dịkarịa ala ụbọchị asaa. ”
Ọbụnadị tupu ọkwa gọọmentị ọhụrụ, anaghị anabata njem nlegharị anya na -abata, mana a na -enye ụfọdụ otu ikike pụrụ iche ịbanye na obodo site na mmemme pilot ma ọ bụ site na njem mmụta.
Ihe dị ka ndị njem nlegharị anya 1,500 gara Israel na Julaị site na ọrụ ịnya ụgbọ elu nke ndị njem nlegharị anya.
Ọtụtụ ndị otu sitere na US, ebe ndị ọzọ si Europe, UK na South America, "ozi ahụ gwara The Media Line.
Onye na-ekwuchitere akwụkwọ mgbazinye mgbazinye kwuru, "A nabatara otu dị ka Taglit-Birthright, mana m na-eche na ọ ga-akwụsị ugbu a n'ihi na ọ bụrụ na ndị mmadụ si United States, ebe ọtụtụ ndị otu ọmụmụ sitere, kwesịrị inwe opekata mpe. ụbọchị asaa nke ikewapụ onwe m, a na m eche na ha agaghị abịa nọrọ ụbọchị asaa ịnọpụ onwe ha tupu ha amalite ime njem [gburugburu Izrel]. ”
Akwadola ndị njem nlegharị anya iri abụọ na abụọ sitere na US maka njem na Ọgọstụ, onye na-ekwuchitere ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya gwara The Media Line, na-agbakwụnye, na "ọ bụ ihe okike na, n'ihi mmachi ọhụrụ a, a ga-enwe mbelata ọnụ ọgụgụ ndị mbata njem nleta. Ọ bụ ihe siri ike n'oge mbido ịtụle oke mmebi ahụ, ebe ọnọdụ nwere ike gbanwee n'oge ọ bụla. ”
Oren, onye njikwa na họtel Rothschild na Diaghilev dị na Tel Aviv, gwara The Media Line na ha abụọ bụ ihe efu.
“Enwere m ike ịgwa gị na isi ihe, ugbu a, ọtụtụ ndị njem na họtel anyị bụ ndị Israel; enweghị ọtụtụ njem nlegharị anya nke mba ofesi, ”ka o kwuru.
Mgbe a jụrụ ajụjụ maka atụmanya nke ụlọ ọrụ nkwari akụ Israel mgbe afọ a gasịrị, Oren zara site n'ikwu, "Echere m na anyị ga -enwe mkpọchi nke anọ n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ."
Nkwupụta gọọmentị na-abịa dị ka ụdị delta na-efe efe nke COVID-19 na-aga n'ihu na-agbasa na mba ahụ, na-ebute ọrịa ọhụrụ ugbu a ihe karịrị 3,000 kwa ụbọchị.
Ebe ikpe ọhụrụ ruru 32% nke ọnụ ọgụgụ kacha elu na Jenụwarị 16, ụlọ ọrụ Prime Minister kwupụtara na Tuesday na ọ ga -atụle itinye usoro mgbochi siri ike.
“Zere nnọkọ, gaa gbaa ọgwụ mgbochi - ugbu a. Ma ọ bụghị ya, a gaghị enwe ihe ọzọ ịmanye mmachi mgbochi, gụnyere mkpọchi mkpọchi, "Prime Minister Naftali Bennett kwuru.
Mịnịsta na -ahụ maka nchekwa Benny Gantz, kwusiri ozi praịm minista, na -ekwu, "Anyị kwesịrị ịkwadebe ọha na ọha echiche maka mkpọchi mkpọchi na Septemba, nke bụ ọnwa nke mmebi akụ na ụba ga -adị obere [n'ihi ezumike ndị Juu dị elu], ma mee ngwa ịgba mbọ ịgba ọgwụ mgbochi iji nwaa igbochi ya. ”
Aron Rosenthal bụ nwa akwụkwọ na Mahadum Edinburgh na onye nkuzi n'ime Mmemme Mgbasa Ozi na Ntanetị Mgbasa Ozi.
MediaLine bipụtara akụkọ a na mbụ.